Indawo ethe cwaka yeemaisonette kwindawo esembindini yeSingen - I-Airbnb
Indawo ethe cwaka yeemaisonette kwindawo esembindini yeSingen
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike uFrank iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Igumbi le-attic eliphindwe kabini elinamagumbi okuhlambela amabini kunye ne-balcony. Ukusetyenziswa kwekhitshi elinomatshini wekofu, umatshini wokuhlamba izitya, ifriji, isitovu, i-oveni ibandakanyiwe. Ukusetyenziswa komatshini wokuhlamba kubandakanywa. I-TV kwigumbi lokuhlala kunye negumbi lokulala. Ukuhamba imizuzu emibini ukuya kumbindi wesixeko, kwiholo yesixeko. Isikhululo sikaloliwe, ithiyetha die Färbe, iziko lenkcubeko i-GEMS inokufikelelwa ngemizuzu emi-5 ngeenyawo. Ifumaneka kwindawo eyayisakuba yimiboniso yeentyatyambo zikarhulumente. I-cul-de-sac ezolileyo kunye netrafikhi yasekhaya. Indawo yokupaka engaphantsi komhlaba iyafumaneka
Igumbi lokuhlala elinekhitshi elivulekileyo kunye nendawo yokutyela kumgangatho wokuqala. Ukongeza kwipaseji encinci, kukho negumbi lokuhlambela elineshawa kunye nendlu yangasese. Ibalcony ikulomgangatho.
Kumgangatho ongentla kukho igumbi lokulala kunye nelinye igumbi lokuhlambela elinendlu yangasese kunye nebhafu.
4.69 · Izimvo eziyi-110
I-Hohentwiel kunye nendawo yangaphambili ye-horticultural show indawo yokumema ukuba uhambe kwaye uphumle. I-gastronomy ebanzi ngaphakathi kohambo lwemizuzu emi-5. Imyuziyam yobugcisa, imyuziyam ye-Hegau kunye noBugcisa kunye neeMoto ze-1 kunye ne-2 iimyuziyam, kunye ne-Aachfreibad nazo zingaphakathi kohambo lwemizuzu emi-5. Ithiyetha "Die Färbe" kunye neziko lenkcubeko "Gems" nazo ziyimizuzu emi-5 kuphela. Kuthatha nje imizuzu emi-2 ukuya kwiholo yedolophu yaseSingen.
Ifikeleleka ngefowuni. Ngokuqhelekileyo nakwisiza kwisaziso esifutshane